crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> July | 2017 | HimiloNetwork
Zakariya July 31, 2017	Leave a comment 330 Views
Los Angeles (Himilonews) – Haddii aad kamid tahay dadka qaar oo aalaaba ka cawda socdaalka maalinleed ee shaqadiisa, sheekadan waxay ugu yaraan ku gelinaysaa xaalad degan. Nin ku nool Los Angeles kaas oo ka shaqeeya San Francisco ayaa lixda saacadood ee safarkiisa shaqada ku qaata duullimaad diyaarad. Maalin walba, Curt von Badinski, oo ah injineer makaanik iyo isku dubba-ridaha shirkad ...
Zakariya July 31, 2017	Leave a comment 475 Views
MUQDISHO — Webiga Shanta Midab’ ama ‘Webiga Qaansa-roobaad’, Cano Cristales waa mid kamid ah webiyada ugu cajiibka badan caalamka. Inta ugu badan sanadka, Cano Cristales river oo ku yaalla dalka Colombia kaliya waa mid aan ka duwanayn qulqul biyoodka webiyada. Hayeeshe xilli kooban oo kamid ah waqtiga, wuxuu yeeshaa muuqaal ku xardhan midabyo kala jaadad ah. Ajada yaryar ee ka ...
Nin subax kasta webi kaga soo dabaasha aqalkiisa ilaa goobtiisa shaqada!
Zakariya July 30, 2017	Leave a comment 291 Views
Muqdisho – Badi socotada magaalada Munich ee dalka Jarmalka waxaa saacado badan kaga baxa socdaalka jidadka mashquulka iyo jaamka la tiictiicaya subax walba, hayeeshe 40-jirka lagu magacaabo Benjamin David, socdaalku wuxuu dhabtii kaga dhigan yahay waaya’aragnimo raaxa leh. Maalin kasta wuxuu kusoo boodaa webiga Isar isaga oo kusoo dabaasha 2 km oo ay ku taallo kobta uu shaqeeyo ee Kulturstrand. ...
Zakariya July 30, 2017	Leave a comment 419 Views
Muqdisho (Himilonews) – Dunideennu waxay wajahaysaa caqabado badan, musiibooyin iyo awoodo kala dhantaalaya midnimadeenna – sida saboolnimo, rabshado, ku xad-gudubka xuquuqda Insaanka iyo in kale – tanina waxay wiiqaysaa nabadda, nabad-gelyada, horumarka iyo xasiloonnida bulshooyinka caalamka. Si looga hortago musiibooyinka iyo caqabadahan is barbar-yaalla, guntooda hoose iyo halka sartu ka qurunsan tahay waa in lagu caddeeyaa difaaca iyo biirinta shucuur ...
Zakariya July 29, 2017	Leave a comment 198 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Maalinta Caalamiga ee Cagaarshowga waxaa la xusaa 28 July sanad kasta si dunida loogu mideeyo kor u qaadista wacyiga la xiriira mushikiladda guud ee cudurka iyo in lagu dhiirr-geliyo is-baddal dhab ah. Waa maalin fursad looga dhigay biirinta dadaallada lagu dhaqan-geliyo mashruuca caafimaadka caalamiga ee WHO ku doonayso xakamaynta cudurkan marka la gaaro sanadka 2021 – iyo ...
Zakariya July 27, 2017	Leave a comment 426 Views
Muqdisho – Soomaalidu Geela wuxuu qarniyo badan usoo ahaa tiir-dhaxaad noloshooda kaalin mug kaga jira. Waxaa la yiri saddex noolaha kale oo dhan fool-xumo ku ah ayaa Geela qurux u ah, waxayna kala yihiin; Farruurta jeexan. Kuruska (tuurta). Habeedda. Wiil aad ugu bogay udgoonka habeedda geela ayaa ku heesay: Umul wiiliyo, Aroos maahide, Maxaa uunsigu, Arooryada hore, Kaaga soo uray?! ...
Zakariya July 26, 2017	Leave a comment 215 Views
Turin (Himilonews) – Laba walaalo ah ayaa adeegsaday wajiga madax-weynaha dhawaan la doortay ee Donald Trump si aan loo garan xilli ay rabeen inay lacag caddaan ah ka xadaan dhowr xarumood oo ATM, marka loo eego booliska dalka Talyaaniga. Bilayska Turin ayaa sheegay inay xireen 26-jir lagu magacaabo Vittorio Lafor iyo 30-jir lagu magacaabo Ivan Lafor kadib markii kaamirada CCTV ...
Zakariya July 25, 2017	Leave a comment 384 Views
Muqdisho (Himilonews) – Isu-tagga midowga shirkadaha bixiya korontada wuxuu irid laba fursad u furan u noqday dadka iyo saamileyda ku midaysan. Taniyo markii ay meesha ka baxday wakaaladda xoogga korontada qaranka ee Eneeyo, shirkadaha gaarka loo leeyahay ee bixiya adeeg koronto waxay hadba kusoo jireen hayaan kaligii socod ah. Si kastaba saddex sano ee lasoo dhaafay waxaa shirkadaha xoogga korontada ...
Zakariya July 24, 2017	Leave a comment 404 Views
Lagos (Himilonews) – Hooyo ayaa cunugeeda yar ka iibsatay kuwa dadka ka ganacsada ‘Human Traffickers’ waayo waxay rabtay inay hesho lacag ay ku gadato mooto , marka loo eego booliska dalka Nigeria. Bilayska Anambra ayaa sheegay inay xireen 24-jirta lagu magacaabo Oluchi Emeobi kadib markii ay cunigeeda laba bilood jirka ah ka iibisay haweeney aan la heyb-sheegin. Saaxiibteed Nchedoch Richard oo ...
Zakariya July 24, 2017	Leave a comment 333 Views
Serbia (Himilonews) – 60-jirta Atifa Ljajic iyo seygeeda, Serif Nokic oo 68-jir ah kuna nool dalka Serbia waxay isku dayi jireen helidda cunug ay dhalaan muddo 20 sano ah. Markii qofna uusan rumeysan in hadda kadib ay wax dhalayaan, tii Alle ayaa timid. Atifa waxay goor dhawayd dhashay gabar caafimaad qabta, hayeeshe isla maalintiiba, seygeeda ayaa isaga dhaqaaqay – isaga ...
Maalinta Caalamiga Dhalinyarada.